Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Nabadda Iyadoo Dalxiiska Hadda - Inkastoo Ma aha oo kaliya
Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • News • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Nabaddu way ka badan tahay dagaal la'aanta - nabad la'aan, dalxiis la'aan. Waa run, wakhtiga dagaalku waxa uu leeyahay geesiyaasheeda la xuso, halka nabada ay leedahay 'halyeeyada aamusan'. Waqtiyada COVID waa kalkaaliyayaasha, dhakhaatiirta, safka hore iyo dadka adeega. Waa huteelka SME, makhaayadda iyo milkiilaha baararka, iyo shaqaalaha bixiya adeegyada daaweynta iyo fayoqabka iyo sidoo kale sida ugu macquulsan waji-xidhka iyo fogeynta - iyo ogaanshaha in xannibaad kale ay burburin doonto ganacsiga.
Markii daadadku yimaaddeen, waxay dumiyeen beero, guryo, kaabayaashii bulshada, iyo noloshii dadka, mutadawiciin ka kala yimid meelo dhow iyo kuwo fogba waxay u yaaceen inay sama falaan.
Dadku waxay ku deeqeen si niyad ah.
Deegaannada uu dabku ka kacay, dab-damisyo geesiyaal ah, oo inta badan aan rajo ka qabin awoodda dabaylaha, ayaa habeen iyo maalinba si ba’an u dagaallamayay, ilaa ay ka daaleen.
Dhammaan si lama filaan ah, madax-bannaanida, hedonism iyo aagga raaxada, haddii kale laga xumaado calaamadaha dhaqan-xumada, waxay dareemeen sidii guriga laga saaray, oo siinaya wax aan ka yarayn rabitaanka jacaylka deriskaaga. Cataclysms waxay abuurtaa sharcigooda. Waqtigii nabadda ayaa helay geesiyaalkeeda, iyo waqtiyada khatarta iyo masiibooyinka dadku waxay muujinayaan dhinacooda kale - waxaa laga yaabaa inay tahay sida ugu fiican.
Hawshu waa adag tahay, dib u dhacu waa dhab, yididiilo waa lama huraan, in kastoo. Gurmadka degdega ahi waxay u nugul yihiin inay kiciyaan marka hore – oo degdeg ah – gargaar, halka horumarka si tartiib tartiib ah u sii kordhaya ay ka maqan yihiin wacyiga buuxa ee dadku si ay u kiciyaan tallaabo degdeg ah. Hantida, oo loo helo tallaabo-tallaabo, waxay ku qaadan doontaa waqtigooda inay midho-dhaliyaan, halka fursadaha shakhsi ahaaneed ee horyaallada inay ' dhalaaliyaan' ay sugayaan.
Guud ahaan, geesinimada wakhtiga nabadda iyo xaalad degdeg ah oo yar ayaa laga yaabaa inay noqoto mid cajiib ah, laakiin maaha mid qiimo yar ("nabad-diidka geesinimada shaki la'aan waa la qiyaasi karo," ayuu yidhi. Albert Einstein). Nabaddu maaha qof is-jilaa; nabaddu waa natiijada camalkeena. Looma baahna in la sheego in tani ay caqabad dhab ah siinayso madaxda Safarka & Dalxiiska sida khubarada isgaarsiinta si ay u dhaqmaan!
Socdaal ahaan, waxaan bixinaa lacag fasaxyadayada. Taas macneheedu waxa weeye in aanu ku raaxaysanayno fasaxayada oo ka sarreeya lacagtii aanu taas ku bixinay. Waa in aan ogaano waxa ku saabsan mudnaanta ahaanshaha martida martidayada. Dhaqanka bulshadu waa furaha wada-noolaanshaha. Dhanka kale, haddii aan - martigelin ahaan - dareemo in martigelinta aan bixinno martidayada waxay ku hanjabtaa inay ku dhammaato nooc ka mid ah nacaybka ay la wareegaan shisheeyaha, markaa kalsoonidayada bulsheed ayaa si ba'an loogu xadgudbay. Abuuridda xadgudubka iyo is-maandhaafku waa hab kale oo lagu sababi karo wasakhowga deegaanka.
'Ishayada' miyir-qabka deegaanka iyo dareenka bini'aadamku waxay u baahan yihiin in la afeeyo, si aan u ogaanno waxa u wanaagsan deegaankeenna jireed (dibadda) iyo maskaxda (gudaha) labadaba. Nabad baa jirta oo keliya, haddii aan si qoto dheer ugu xididno nafteenna shakhsi ahaan, kuwaas oo wadaaga dareenka sharafta midba midka kale. Socdaalka & Dalxiiska ayaa bixiya marxaladda caalamiga ah ee wanaagga - ama xun - dhaqanka. Qof baa yidhi, waa sida isha oo kale oo aan is arki karin. Waxaa laga yaabaa inay barato inay dareento aragtideeda deegaankeeda, oo la mid ah kartida kobcinta sawir qaadaha.
Markaan eegno sheegashada duulista sare ee Dalxiiska si kor loogu qaado fahamka caalamiga ah, waxaa laga yaabaa inaan ogaano: Markay ugu xuntahay waa been abuur (tusaale safar loo dhan yahay!), Markay ugu fican tahay waa fikir rabitaan. Waxay quudinaysaa khuraafaadka ay wadaagaan daneeyayaasha ee ah in nacaybku meesha ka baxayo, waxayna kicisaa rajada aamusan ee aan wadaagno nafteenna, dadka safarka ah, in run ahaantii tani aysan dhici doonin, oo aan awoodno inaan ku garab istaagno fikradaha halbeegga ah. Halkii aan la kulmi lahayn dadka deegaanka, waxaan la kulannaa dad waddaniyiin ah. Saamaynta hoose ee loogu talagalay in lagu fahmo fahamka caalamiga ah waa mid aad u yar: In kasta oo ku biirista dalxiisyada dalxiiska, ku raaxaysiga fanka cunto karinta ee martida loo yahay ama ka dhex baadhaaya goobaha dukaamaysiga ee midabka leh, inta badan xidhiidhada fasaxa ayaa ah kuwo teel teel ah oo aan caadi ahayn. Waqti ka dib way libdhaan, si la mid ah fikradaha safarka ee marmarka qaarkood.
Muuqaalka kore ee 'dalxiiska Unlimited' ayaa soo ifbaxay sababtoo ah calaamadihii hore ee bulsheed ee aad u kala duwan ayaa noqday kuwo mugdi ah ama gebi ahaanba la tirtiray. Goobaha fasaxa ee mar loo tixgeliyey inay gaar yihiin ayaa hadda lagu bixiyaa buug-yaraha ama degel kasta.
Meelaha qaarkood waxay soo mareen isbeddel gaar ah oo la taaban karo, tusaale ahaan Baden-Baden: Waxaa hore loogu tirin jiray 'caasimada xagaaga ee Yurub', halkaas oo dadka hodanka ah iyo kuwa quruxda badan ay ku soo bandhigayeen 'Vanity Fair'. fayoobaanta xitaa macaamiisha daryeelka. - Ama dooro Madeira, halkaas oo ku yaala sanatoriums kala duwan oo cimilo yar ah ay fasalada sare ee dunidu mar dib u soo kabteen: Maanta jasiiradda-jaziiraddu waa safar dalxiis iyo dalxiis.
Wali aad uga muhimsan, waa arrinta Venedik: Waxaa lagu soocaa sida Dhaxalka Adduunka ee Qaramada Midoobay, Venice waxaa soo galay ilaa dhowaan dalxiisayaal muddo gaaban ah oo ka yimid doomo-maraakimo waaweyn oo khatar gelinaya nuxurka qaabdhismeedka magaalada iyo xasilloonida dadka maxalliga ah. Dadka deegaanka ayaa duulaanka noocaan ah u arkay weerar – lagu soo qaaday magaaladooda iyo noloshooda bulsho.
Xaaladda meelaha kale waxay u egtahay mid la mid ah: Angkor, oo mar ahaan jirtay macbadka Hindu-Buddhist ee sharafta leh ee boqorradii Khmer, wuxuu bilaabay inuu burburo qarnigii 15aad wuxuuna ku dhacay ilo. Waxaa la rumeysan yahay in isbeddelka cimilada (!) iyo hubris aadanaha ay keeneen hoos u dhaca Angkor.
Kaliya qarnigii 19-aad sahamiyayaal Faransiis ah ayaa helay burburka waxayna keeneen Angkor iftiinka maalinta. Dagaalkii Vietnam ka dib, Khmer Rouges oo shuuci ah ayaa qabsaday. Maanta, Khmer Rouges way tageen, iyo "daayeerro badan iyo dalxiisayaal" (Christopher Clark, taariikhyahan Australian) ayaa dib u qabsaday burburka macbudka ee Angkor Vat iyo Angkor Thom.
Gudaha 'Expansion du tourisme', Ms. Anita Pleumaon oo ka tirsan Kooxda Baadhitaanka iyo Dabagalka Dalxiiska (time-team) waxay soo koobaysaa: "Qiimaha casriga ah, ee lagu soo rogay bulshooyinka Aasiya ee horumarka degdega ah, waxay u muuqdaan inay sababeen saamayn gaar ah oo xun iyo dareen khalkhal. kala fogaansho, kacdoon iyo kalsooni darro. Habka ganacsi-is-weydaarsiga iyo isku-duubnida iyo faafinta baaxadda leh ee fikradaha cusub, sawirrada iyo macluumaadka ayaa meel yar uga tagay caadooyinka, muujinta dhaqanka, qiyamka qoyska iyo bulshada. Qaabka aan u socono ma waxay dhisaysaa seef laba af leh maadaama caqli-galkeeda iyo hab-raaceeda ay raacaan qaababka reer galbeedka? Ma jiraan waxyaabo ay wadaagaan dadaalkeenna xoogga leh ee 'dhisidda meesha' iyo fikradda 'Dhismaha Qaran' ee Dagaalkii Qabow ka dib?
Cadeymaha ugu naxariista daran ee ku saabsan dimoqraadiyada qaabka reer galbeedka iyo dhismaha qaranka ayaa laga marag kacayaa Afgaanistaan. Afgaanistaan, sannadihii 1960-meeyadii iyo 70-meeyadii, meel safar oo xiiso leh iyo janno ay ka soo baxeen Yurub, waxay si guul leh u diyaarisay guuldaradii laba quwadood oo adduunka ah: ciidankii Soofiyeeti ee 1989 iyo ciidamadii NATO ee Maraykanku hoggaaminayey Agoosto 2021. Soofiyeedka, Afgaanistaan ​​waxay ahayd uun ciyaar awoodeed, Maraykanka iyo NATO waxay u ahayd xarunta la aqoonsaday ee argagixisada caalamiga ah iyo meesha uu ku dhuunto Osama Bin Laden, argagixisada ugu sareysa 9/11.
Hadafka Maraykanka iyo NATO ee faragelinta milatarigu waxay ahayd in la rido dawladdii Taalibaan ee markaas jirtay oo ay soo qabtaan Bin Laden. Labada hawlgalba waa la dhammaystiray, laakiin caqabad aad u qurux badan ayaa soo jiidatay xulafada reer galbeedka si ay "yar u joogaan," si ay u xoojiyaan Afgaanistaan ​​​​dimoqraadiyad reer galbeedka ah. Hadafkani wuxuu ku guuldareystay ceeb, maleeshiyadii beeralayda Taalibaan ayaa soo laabtay waxayna ku qasbeen Mareykanka iyo NATO inay ka baxaan Afgaanistaan ​​harum scarum - iyada oo ay jiraan dad badan oo dhintay, ku dhaawacmay ama la dhaawacay, balaayiin doolar lagu kharash gareeyay, iyo shakiyo halis ah. Waxay ku dhammaanayaan su'aasha weligeed ah laakiin aan weli laga jawaabin: Maxaa loogu talagalay?
Xusuusin murugo leh oo ku saabsan Dagaalkii Vietnam ayaa dib u soo noolaaday. Sawirada baxsadka cajiibka ah ee helikabtarrada ka soo baxay saqafka sare ee Saigon sanadkii 1975 ayaa la soo bandhigay sanadka 2021, sawirada cirka ee laga soo qaaday garoonka diyaaradaha ee Kabul, oo ay buux dhaafiyeen dad quus ah, qaar ka mid ah iyaga oo ku dheggan dulka hoose ee diyaaradda oo ku dhacay…
Yaa dambiile ah? Yaa qaadaya mas'uuliyadda? Ka warran casharrada la bartay?
Waxaa mas'uul ka ah dhammaan kuwa aan fahmi karin ama diiday inay aqbalaan duruus ay ahayd inay hore u bartaan: marka hore, qaababka bulshada iyo hab-nololeedka bulshada laguma wareejin karo kuwa kale xoog - meelna iyo haba yaraatee Afgaanistaan; Midda labaad, shaqada ciidanku waa inay dagaal qaadaan, ee maaha inay dhisaan dugsiyo, isbitaallo, ceelal qodis; Saddex, mashaariicda ciidamada iyo kuwa madaniga ah labaduba waxay u baahan yihiin aragti adag oo waqtiyeysan, ama ujeedo ay tahay in laga dhigo qof walba sababtiisa - ee ma aha oo kaliya habab si wanaagsan loo qorsheeyay oo leh dhammaad furan iyo wax badan oo dhalanteed ah; Marka laga soo tago, xidhiidhada isku xidhan ee u dhexeeya akhyaarta gudaha iyo la-hawlgalayaasha ajnabiga ah waxay leeyihiin dareen xooggan oo ah eex iyo musuqmaasuq dheeraad ah. Noocan ah 'isku-xidhaha khatarta ah' waxay si lama-huraan ah u horseedi doontaa isku dhac ama xitaa dagaal waxayna keeni doonaan qalalaase qaawan ugu dambeyntii.
Inta badan, ka dib niyad-jabka iyo ballan-qaadka milatari ee muddada-dheer, saaxiibada ajnabiga ah doorkooda ugu wanaagsan wuxuu u muuqdaa inuu ka tago muuqaalka - waayo-aragnimada soo noqnoqda ee duulimaadka ceebta ah, halkii uu ka bixi lahaa nidaamsan, haddana hadda waxaan rajeyneynaa casharkii ugu weynaa ee la bartay: in la ilaaliyo. ka baxsan arrimaha gudaha ee dalalka kale, gaar ahaan marka kala duwanaansho bulsheed iyo dhaqanka ay aad u adag tahay in la iska ilaaliyo. Qoraaga Ingiriisi-Dutch ee Ian Buruma waxa uu tilmaamayaa 'dabinkii gumaysiga' quwadaha waaweyni waxay u nugul yihiin inay ku dhacaan, markaas iyo hadda.
Ma aad bay u fogtahay in sidoo kale lagu dabaqo qoraalka 'dabin gumaysi' ee NGO-yada gargaarka horumarineed? Caawinta horumarinta diidmadu waxay wajaheysaa inta badan bartilmaameedka dabeecadda joogtada ah ee mashruucyo farsamo oo badan, oo leh ujeeddooyin sare laakiin natiijooyin la taaban karo oo keliya. Waa run in khubarada ajaanibka ahi ay si faa'iido leh u dhaqmi karaan oo keliya ma aha inay yihiin taageero gacan-ku-taag ah iyo tababarayaal, laakiin sidoo kale dhexdhexaadiyayaal la aamini karo oo u dhexeeya kooxaha danaha maxalliga ah ee iska soo horjeeda. Horumarinta Dalxiiska ee ka kooban waxyaabo kala duwan iyo cabbiraadyo waa wax kasta oo aan ahayn wax laga dhaafo. Hoog, jirrabaadda ayaa dhab ah in qofku uu aad ugu lug yeesho arrimaha gudaha ee waddanka martida loo yahay, waxaana laga yaabaa in khabiirku ka tago oo kaliya inuu sawiro xaqiiqda ah in uu qayb ka noqday dhibaatada, halkii uu xalin lahaa.
Caadi ahaan aad ayaa loogu mahad naqayaa in si cad loogu dhawaaqo ereyada, haddana marka la eego aragtida yaabka leh ee ay ka siman yihiin 'Dalxiiska' iyo 'argagixisada', caydu waxay noqon kartaa dhimasho: Dalxiiska wuxuu jecel yahay xorriyadda, argagixisaduna waxay u baahan tahay nacayb. Dalxiiska, marka loo eego sida ugu xun, wuxuu u dili karaa dhaqanka maxalliga ah si jilicsan, halka argagixisaduna ay isla markiiba disho, labadaba bartilmaameed iyo si aan kala sooc lahayn, oo aan naxariis lahayn, iyadoo dalxiisku yahay mid ka mid ah dhibbanayaasha ugu horreeya.
Dalxiisku ma ubaxi karo, halka argagixisadu ka jirto, Dalxiiska wuxuu u baahan yahay nabad. Sideen u odhan karnaa Socdaalka & Dalxiiska ayaa si wax ku ool ah uga qayb qaata abuurista iyo ilaalinta nabadda? Miyuu jiraa qof waligii maqlay door la taaban karo oo ururka Dalxiiska, si wadajir ah ula shaqeeya kuwa kale, ay ka ciyaareen, dadaal ay ku hayaan, in la yiraahdo, Afgaanistaan ​​waddan nabad ah oo xitaa loo dalxiis tago, sidii ay ahaan jirtay lixdankii?
Dhawr labaatan sano ka dib dagaalka, Vietnam waxa ay noqotay meel loo socdaalo oo soo jiidasho leh, xataa iyada oo ay la socoto nidaam shuuci ah oo ku jira goob raasumaal (!), iyo xidhiidh saaxiibtinimo oo ay la leedahay Maraykanka iyo aduunka. Wada xaajoodyada siyaasadeed, isku xirka shirkadaha ganacsiga, iyo booqashadii taariikhiga ahayd ee Madaxweyne Clinton ee 2000 ayaa caadi ka dhigtay xiriirka dowladda iyo ganacsiga waaxdooda. Safarka & Dalxiiska ayaa raacaya habkaas, haddana tillaabooyinka hore ee laga yaabo inay muujiyeen ka go'naanta UNWTO ama WTTC way adag tahay in la xasuusto.
Ma u qaadan karnaa Vietnam qorshe dhiirran oo loogu talagalay 'caadaysiinta' xiriirka imaarada Afgaanistaan? Ma ka filan karnaa dalxiiska dalxiiska buuraha ee Hindu Kush mar kale agagaarka 2040-meeyadii - oo ay la socdaan Islaamiyiinta Taliban hagayaasha dalxiiska saaxiibtinimo?
Waali ku filan, mid ayaa laga yaabaa inuu u maleeyo, madaxa ruxaya - labaatan sano ka dib Dagaalkii Vietnam, Samuel P. Huntington wuxuu daabacay blockbuster-kiisii ​​​​siyaasadeed 'The Clash of Civilizations'. Aragtida Huntington ee ah in dagaallada mustaqbalka aan laga dhex qaadi doonin waddamo laakiin dhaqamo, ay horseedaan doodo muran badan dhaliyay - iyo dib u soo noolaynta 'Dialogue among Civilizations', oo ka soo horjeeda qoraalkii uu faylasuuf Austrian Hans Köchler ku difaacay 1972, warqad uu u diray UNESCO iyo ku haray iloobaan.
Xaaladda hadda jirta miyayna cudur daar u noqon doonin faragelinta ka go'an Safarka & Dalxiiska, oo ay la socdaan hay'addeeda ugu sarreysa UNWTO iyo WTTC, si ay uga caawiyaan dib u cusboonaysiinta wadahadalka 'xadaaradaha', iyadoo la adeegsanayo warbaahinta isku midka ah iyo kuwa dhijitaalka ah, si muuqata oo xoog leh, iyadoo ka wakiil ah fikradda samaynta " Nabad iyadoo loo marayo Dalxiiska - in kastoo aysan ahayn oo kaliya"
Farriinta ayaa dalbanaysa in lagu daro lammaanayaasha isku fikirka ah ee gudaha iyo dibadda ee Safarka & Dalxiiska, si ay ugu biiraan fikirka iyo ficilka. Waxaa lagu dhiirigelin karaa fikradaha Louis D'Amore si qumman oo xamaasad leh loogu faafiyey loona difaacay aasaasihii iyo madaxweynaha muddada dheer ee 'Machadka Caalamiga ah ee Nabadda ee loo maro Dalxiiska.
Hagaag, riyadu ha noqoto mudnaan kuwa rajada leh oo ha noqoto hubka kuwa aan awoodda lahayn - kuwa xoogga badan waxay yeelan doonaan arrimahooda u gaarka ah: Halka Bear Ruushku uu ka soo kabtay waayo-aragnimadiisa 'Afghanistan' oo uu mar kale dib u hagaajiyay, Eagle US iyo transatlantic. hummingbirds ayaa wali ku mashquulsan sidii ay u leefsiin lahaayeen nabarradii ka soo gaadhay hawshii ay ku fashilmeen. Masduulaagii Shiinuhu ma awoodo in uu dhoola cadeeyo ceebta ay kula xafiiltamaan caalamka. Waxay u muuqataa in dunidu ay ka soo baxayso dagaalkii qaboobaa isla markaaba nabad qabow. Taasi waxay ka dhigan tahay wax yar oo aan ahayn hubaynta kaliya, weli ku filan in ay halis u noqoto isbeddel cimilo siyaasadeed 'kulul', oo laga yaabo in aan la socon 'khadadka khaladka ah' ee dhaqanka Huntington, oo weli ku jira qaybo hore, oo la yaqaan Galbeedka-Bari. Way adag tahay in la dhaafo fikradda ah in indho la'aanta siyaasadeed ay dhalin karto "qaabab, asal ahaan ka yimid soo noqoshada dhacdooyinka - laakiin inta badan," sida uu yiri faylasuuf Leibniz. Waa maxay musalafsanaanta hal-abuurka siyaasiga ah mar haddii Daahii Birtu meesha ka baxay!
Waxa jirta aragti kale oo la yaab leh oo ku saabsan qaababkan: “Marka ninku u soo galo adduunka isagoo tuug ah, dunidu waxay ku qasbi doontaa inuu sii noolaado sidii tuugnimo. Tani waa jawaabta adduunka, waxaan dhihi karnaa, aargoosigeeda, ayuu yiri Ludwig Fusshoeller ee 'Die Dämonen kehren wieder' ('Soo noqoshada Daemons'). Soo-booqdayaasha loo tixgaliyo inay yihiin kuwo soo galay, waxa loola dhaqmi doonaa sido kale, ha ahaadeen dalxiisayaal fudud, dadka ganacsatada ah – ama ciidamada shisheeye! – Maxaan dhihi karnaa? 'Bye-bye to soo dhawoow dhaqanka' kuma filna.
Riwaayadda caanka ah ee Goethe, yoolka dhabta ah ee Faust waxaa lagu go'aamiyaa guushiisa gaarka ah ee dabeecadda. Si kastaba ha ahaatee, si la mid ah sida uu u dareemayo farxad aad u weyn inuu dhammeeyey mashruuciisii ​​ego-dugsiga ahaa, wuxuu lumiyay sharadkiisii ​​Mephisto oo uu ka baryay: "Markaa, daqiiqada waxaan ku dhiirran lahaa inaan idhaahdo: 'yar joog! Aad baad u qurxoon tahay!'
Haddii aan eegno meeraheena maanta, waxaan ogaanay 'Dunida Faustian' inay si bareer ah u soo laabatay, iyadoo quruxdu ay mar kale soo labbistay mucjisadii quruxda badnayd ee sannadkii hore iyo martigeliyaha iyo booqdayaasha labadaba rabitaan aan wakhti lahayn, oo ay buuxisay habaarkii masiibada ahaa - "inaad joogtid in muddo ah..."
Qoraha, Max Haberstroh, waa xubin aasaase ka ah Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN).